(၁၀)တန်းဖြေ ထားတဲ့ အပျိုဖော် ဝင်ခါစ (၁၆)နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲ ကို အဖေ တစ်ယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ… – Let Pan Daily
၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ သမီး မရှိပဲ အခန်းက သပ်ရပ်နေပြီး စားပွဲပေါ်မှာ စာတစ်​​စောင်​ တင်ထားတာကို တွေ့ လိုက်ရပါတယ် …။ စာကို ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါ…. ချစ်သော ဖေဖေ…..စာကို ရေးရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဖေဖေနဲ့ မေမေကို တကယ် ချစ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် သမီးရဲ့ ချစ်သူနောက် ကို အပြီး လိုက်သွားပါပြီ… စိတ်မဆိုး ပါနဲ့ ဖေဖေ …။ သူက သမီးအပေါ် ကောင်းပါတယ်။ အပြင်ပန်းက တက်တူး တွေ၊ ဆေးမင်ကြောင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ များများ သူ သမီးကို တကယ် ချစ်တာ ခံစားမိပါတယ်။သမီးထက် ၁၄ နှစ် ပိုကြီး တယ်လေ …။ အိမ်ထောင်ကွဲပေါ့။ သို့ပေမယ့် သူ့ဇာတ်လမ်း တွေ ပျက်သွားပြီလို့တော့ သမီးကို ကတိပေး ထားတယ် …။
သူ ကတိဖျက်တာ ၁၅ ခါ မကပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံး ဖြစ်မယ်လို့ သမီး ယုံကြည်တယ်လေ …။ သမီးမှာလည်း ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလေ။ငယ်သေးပေမယ့် ဒီအရွယ်မှာ မွေးလို့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေးတွေ အများကြီး မွေးပြီး ဘဝ တည်ဆောက်ဖို့လည်း သမီး ဆန္ဒရှိပါတယ် …။သူလည်း ဒီတိုင်းပဲလေ။ ဒီအတွက် ဖေဖေ စိတ်မပူပါနဲ့။ သူ့မှာ အလုပ်အကိုင် မရှိဘူး ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မြို့မှာ သူ ဆေးခြောက် ဖြန့်တော့မယ်လေ။
သမီးကို ချစ်ရင် ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့နော် …။သမီးတို့ ချမ်းသာတဲ့ တစ်နေ့ကျ ဖေဖေ တို့ကို ပြန်ကျေးဇူး ဆပ်မှာပါ။ ဖေဖေ့ကိုလည်း ချစ်တယ်။ ချစ်သူကိုလည်း ချစ်တယ်။ ဒီတော့ သမီး ပိုချစ်ရတဲ့ ချစ်သူဆီကိုပဲ လိုက်သွားပါပြီ အဖေ …၊ ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် အဖေ့ရဲ့ သမီးစာဖတ်ပြီးချိန် ဒေါသကြီးလှတဲ့ အဖေ ဖြစ်သူဟာ လက်တွေတောင်ကတုန် ကရင် ဖြစ်လာပါတယ်။
စာကို ဆုပ်ဖြဲမယ်အလုပ် အောက်နားမှာ စာနည်းနည်း ထပ်ရေးထားတာ တွေ့တော့ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ် …။ PS: ဖေဖေရေ…။ အပေါ်က ရေးထားသမျှ တစ်ခုမှ မမှန်ပါဘူးနော။ အခု သမီး ဘေးက သူငယ်ချင်း အိမ်မှာ။ လောကမှာ ထင်ထားတာတွေ (သမီး ရီပို့ကဒ်) ထက် အရမ်းဆိုးရွားတဲ့ အရာတွေ ရှိသေး၊ ဖြစ်နိုင်သေး တာကို သမီး ပြောပြချင်တာပါ …။လောလောဆယ် စားပွဲ အံဆွဲထဲမှာ ကျောင်းက ပေးတဲ့ ရီပို့ကဒ် ( Report card ) ထားထားတယ် ဖေဖေ ။ အမှတ်နဲ့ အဆင့်ကို မကြည့်ပဲ လက်မှတ် ထိုးပေးနော်။ သမီး ကို ချစ်လို့ စိတ်ဆိုးပြေရင် ဖုန်းဆက် ခေါ်လိုက်နော် I love you Dad …!
(၁၀)တနျးဖွေ ထားတဲ့ အပြိုဖျော ဝငျခါစ (၁၆)နှဈသမီးလေး အခနျးထဲ ကို အဖေ တဈယောကျ ဝငျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ…
၁၆ နှဈသမီးလေး အခနျးထဲကို အဖတေယောကျ ဝငျကွညျ့တဲ့ အခါ သမီး မရှိပဲ အခနျးက သပျရပျနပွေီး စားပှဲပျေါမှာ စာတဈ​​စောငျ​ တငျထားတာကို တှေ့ လိုကျရပါတယျ …။ စာကို ဖတျကွညျ့တဲ့ အခါ…. ခဈြသော ဖဖေေ…..စာကို ရေးရတဲ့အတှကျ စိတျမကောငျးပါဘူး။ ဖဖေနေဲ့ မမေကေို တကယျ ခဈြပါတယျ။
သို့ပမေယျ့ သမီးရဲ့ ခဈြသူနောကျ ကို အပွီး လိုကျသှားပါပွီ… စိတျမဆိုး ပါနဲ့ ဖဖေေ …။ သူက သမီးအပျေါ ကောငျးပါတယျ။ အပွငျပနျးက တကျတူး တှေ၊ ဆေးမငျကွောငျတှေ ဘယျလောကျပဲ မြားမြား သူ သမီးကို တကယျ ခဈြတာ ခံစားမိပါတယျ။သမီးထကျ ၁၄ နှဈ ပိုကွီး တယျလေ …။ အိမျထောငျကှဲပေါ့။ သို့ပမေယျ့ သူ့ဇာတျလမျး တှေ ပကျြသှားပွီလို့တော့ သမီးကို ကတိပေး ထားတယျ …။
သူ ကတိဖကျြတာ ၁၅ ခါ မကပမေယျ့ ဒီတဈခါတော့ နောကျဆုံး ဖွဈမယျလို့ သမီး ယုံကွညျတယျလေ …။ သမီးမှာလညျး ကိုယျဝနျ ရှိနပွေီလေ။ငယျသေးပမေယျ့ ဒီအရှယျမှာ မှေးလို့ ဘာမှ မဖွဈပါဘူး။ ကလေးတှေ အမြားကွီး မှေးပွီး ဘဝ တညျဆောကျဖို့လညျး သမီး ဆန်ဒရှိပါတယျ …။သူလညျး ဒီတိုငျးပဲလေ။ ဒီအတှကျ ဖဖေေ စိတျမပူပါနဲ့။ သူ့မှာ အလုပျအကိုငျ မရှိဘူး ဆိုတာ မှနျပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ မွို့မှာ သူ ဆေးခွောကျ ဖွနျ့တော့မယျလေ။ သမီးကို ခဈြရငျ ဘယျသူမှ မသိစနေဲ့နျော …။သမီးတို့ ခမျြးသာတဲ့ တဈနကြေ့ ဖဖေေ တို့ကို ပွနျကြေးဇူး ဆပျမှာပါ။
ဖဖေကေို့လညျး ခဈြတယျ။ ခဈြသူကိုလညျး ခဈြတယျ။ ဒီတော့ သမီး ပိုခဈြရတဲ့ ခဈြသူဆီကိုပဲ လိုကျသှားပါပွီ အဖေ …၊ ခဈြခွငျး မြားစှာဖွငျ့ အဖရေဲ့ သမီးစာဖတျပွီးခြိနျ ဒေါသကွီးလှတဲ့ အဖေ ဖွဈသူဟာ လကျတှတေောငျကတုနျ ကရငျ ဖွဈလာပါတယျ။ စာကို ဆုပျဖွဲမယျအလုပျ အောကျနားမှာ စာနညျးနညျး ထပျရေးထားတာ တှတေ့ော့ ဆကျဖတျကွညျ့လိုကျတယျ …။ PS: ဖဖေရေေ…။ အပျေါက ရေးထားသမြှ တဈခုမှ မမှနျပါဘူးနော။ အခု သမီး ဘေးက သူငယျခငျြး အိမျမှာ။
လောကမှာ ထငျထားတာတှေ (သမီး ရီပို့ကဒျ) ထကျ အရမျးဆိုးရှားတဲ့ အရာတှေ ရှိသေး၊ ဖွဈနိုငျသေး တာကိုသမီး ပွောပွခငျြတာပါ …။လောလောဆယျ စားပှဲ အံဆှဲထဲမှာ ကြောငျးက ပေးတဲ့ ရီပို့ကဒျ ( Report card ) ထားထားတယျ ဖဖေေ ။ အမှတျနဲ့ အဆငျ့ကို မကွညျ့ပဲ လကျမှတျ ထိုးပေးနျော။ သမီး ကို ခဈြလို့ စိတျဆိုးပွရေငျ ဖုနျးဆကျ ချေါလိုကျနျော I love you Dad …!
Fb သုံးနေတဲ့ ညီလေး ၊ ညီမလေး ၊ သားသား၊ မီးမီးလေး တွေ့ သိဖို့ …… ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ထားပါ
ခေတ်အခြေအနေ အရ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင် ပြောင်းလဲသွားရသော မြန်မာ စကားပုံများ “
ဒူးနာ ခါးနာ ရောဂါ အမျိုးမျိုး အတွက်ပါ